Banyere Q2 2017, nchịkọta ntanetị micro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua. Nke ahụ bụ ihe dị ka okpukpu anọ nke ndị Jerman. Ma obu 8x onu ogugu nke Argentina. Ma obu 32x onu ogugu nke Portugal.
Lee isi ihe m? Twitter bụghị onye ọ bụla na Twitter dan ada mmasị na gị na ngwaahịa gị.
1.2 Mematuhi hashtag berasaskan Web
3 3. Ride na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Laman web na ọkekọrịta ọdịnaya ma jiri shehtags mee ihe n’ụzọ dị irè na Twitter, ị nwere ike ịmepụta ahịa na ịmepụta ihe mgbaru ọsọ markah nzukọ gị na obere ego.
Raja anyi abanye n’ime nke a, o di nkpa icheta na dika ahia, usoro izo eji Twitter ga-adighi iche na onu ahia. Jide n’aka na ị ada atụmatụ ma na ọ na-akọwa ihe mgbaru ọsọ doro anya nke azụmahịa gị!
Nake a abụghị ihe d Twitter iche na Twitter, e-bụ na ị na-asọmpụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’ebe ahụ. Laman web na ụmepụta ọdịnaya dị mma nke na-emetụta ma na-amasị mmasị n’ahịa gị, ị ga-enwe nsị dị mma karịa asọmpi ahụ.
Ejiri ihe na-eme ihe na-emetụta ihe na-eme, nke pụtara na usoro ndụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya. Adakah ịmụmaatụrere zuru oke nke na-adịru ụbọchị atọ.
#diskon dị ka anyị na-ejide kwa afọ #sale at #JCPenney ma nweta penny gị! Nanị ụbọchị 3! (pautan pautan pendek) "
Mematuhi hashtag berasaskan Web
Azụmahịa dan dabeere na berasaskan web ga-abụ ihe a na-atụle na ụwa ahịa dịka "dah lama".
E wezụga nke ahụ, ọ na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe n’ime ọdịnaya gị ma tinye mgbasa ozi dị mma dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo. Foto na-agwa a puku okwu na ihe menjerit-jerit dalam keadaan:
Foto dan ikuti na-ezipụ ozi na ndị mmadụ nwere ike ma ọ bụrụ na ederede ederede.
Ndị n’ozuzu ha na-ekwukarị ụdị ahịa ma ọ bụ ngwaahịa ha maara. Ihe ịma aka na-aghọ ịghọ otu n’ime ụdị ndị ahụ. Laman n’iji Twitter iji mepụta njirimara gị akara, ị ga-enwe ike ịbanye na mpaghara nke ihe ùgwù ahụ.
Tapak na nchikota ndi a, ulo oru ahu nwere uzo nke ndi ngbuputa nwere ike igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nwere ike iru. Na nkenke, ịdị ahụ na-eme ka ndị Peminat na-ere ahịa ha!
Otu ihe iji rịba ama banyere usoro a n’agbanyeghị na ị ga-anwale ma tụọ anya otu esi eji ya. Laman web na laman web echiche na okike nke njirimara gi ma ọ bụ akara gị, ị ga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
Adakah saya telah mengetahui Bill Cosby gbara mgbe ha kere ya #Cosbymeme hashtag. N’ụzọ doro anya, ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala ha na-emepụta ma mee ka hype banyere kpakpando ahụ. Aduhai na ha, nke a bu ihe omuma nke ihe mebiri:
3. Ride na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Nke a bara uru karịsịa markah obere ụlọ ahịa ndị nwere ike ịnweghi ihe mgbapụ nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na mgbasa ozi. O yighị ka ndị mmadụ ga-achọ #TomsPremiumSalmon, n’ihi ya enwere ike ịnweta ngwa ngwa na ọnọdụ Twitter.
Ka anyị kwuo na Tom na-ahụkarị na ọ bụ #fishoil. Ihe doro anya ọ ga – eme bụ ịgbakwunye nke ahụ na tweet huruf ndụ ọ hụrụ n’anya:
Tapak na isoro usoro, ị ga-enwe ike ịkwalite ha ma na-ebugharị akara gị ma ọ bụ ngwaahịa
O doro anya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ tinyere ndị na-ewu ewu, nyocha na nyocha, n’ihi ya, ị ga-ahụ nkwụnye ziri ezi nke ụgwọ ọnụahị nụóóóóó.
Nke mbụ: Saya tidak perlu 140 lagi.
Buru n’uche na tweet gị na-echekarị banyere azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa gị bụrụ ndị ọkachamara, mgbe ahụ, atụla anya na ọ ga-erughị ala na onye na-adọrọ mmasị gị. Twitter tanda azụmahịa abụghị naanị ihe a na-eme "naanị n’ihi na onye ọ bụla na-eme ya", ma ọ bụ ihe ngosi nke azụmahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi.
Sochie nsonaazụ mgbasa ozi gị na statistik
Na njedebe nke ụbọchị, laghachi na isi ihe, nke bụ icheta ihe mere i ji nọrọ na Twitter. Ozugbo ị malitere Tweet na-esote (atụ anya) nke ọma, ọ bụ oge iji mụta otú ọ dị irè hashtags gị.
N’ebe a, ọ dị mkpa ịghara ịdaba ‘ọnyà efu’. Nke a pụtara na ị ga-ekpe ikpe ma ọ dị irè dị irè site n’ile anya metrik dị arọ dịka nchịkwa ndị mepụtara, ọnụahịa ahịa na ọnụego mgbanwe. Nke a bụ ihe ike azụmahịa gị, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ nke mmasị ma ọ bụ re-tweet ị nweta.
Laman web n’ịgbaso nọmba ahịa dịka mgbasa ozi ahịa Twitter gị, ị ga-enwe ike ịmepụta foto nke ọrụ na ihe na-adịghị. N’ebe a, ị ga-achọpụta na ihe kachasị ewu ewu, ọ bụghị mgbe niile bụ ihe kasị mma markah azụmahịa gị.
Na-adịgide adịgide, nọrọ na-emekọ ihe ọnụ, ma gee ndị na-ege gị ntị ntị mgbe ha na gị na-akpakọrịta na anyị na-emesi gị obi ike, d Liverpool ka Liverpool, #YNWA.